Hawl-wadeennada xafiiska Garowe oo dhamaystay tababar saddex cisho – Sawirro – Ophrd
Mail us : info@ophrd.pl.so
Hawl-wadeennada xafiiska Garowe oo dhamaystay tababar saddex cisho – Sawirro
2nd September 2020 Articles, Features, News, ReportsPuntland Human Rights Defender
Garowe, 1 Sibtembar, 2020 – Tababar muddo sadde cisho ah socday hawl-wadeennada xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland ayaa soo idlaaday gelinkii dambe ee Talaadada. Tababarkan oo ay bixinayeen khuburo dhinaca maamulka iyo horumarinta xafiisyada ah isla markaasna ay gacan ka geysteen khuburo shacri ayay ka faa’iidaysteen shaqaalaha iyo saraakiisha xafiiska dhexe ee Garowe.
Daraasaadka tababarka lagu bixiyay mudada uu socday ayaa isugu jiray kuwa la xiriira dhinaca maamulka hufan iyo xisaabaadka, wada-shaqaynta kooxda, maamulka kiisaska, in la dabakho qorshaha guud ee xafiisku degsado saddexdii sanaba mar iyo dhawrista iyo horumarinta xuquuqda Aadanaha.
Difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland Avv. Siciid Cabdi Mumin oo tababarka u xiray hawl-wadeennada ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay in la dardar geliyo hawl-socodsiinta shaqada xafiiska iyo in la guto waajibaadka dastuuriga ah ee xafiiska.
Tan iyo markii uu xafiiska la wareegay bilk a hor Difaacaha cusub waxaa socday dib-u-habayn iyo dadaalo kor loogu qaadayo shaqada xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland.
← Difaacaha oo kormeeray agab muhiim ahna ku wareejiyay xabsiga weyn ee Garowe – Sawirro	Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha oo gogosha maxaabiista siiyay Xabsiga weyn ee Boosaso – Sawirro →
South Africa: There Have Been Nearly 1,200 Shack Fires in Cape Town This Year, Claiming Over 80 Lives 19th September 2021
[GroundUp] The City used to provide kits swiftly for fire victims but the end of a grant means that SASSA has taken this over, and help comes much slower
Cameroon: Migrants Deported From UAE Face Conflict or Exile 19th September 2021
Xafiiska Difaacaha oo hoggaamiyay kormeerka u kuur-gelidda xaaladda goobaha dadka lagu xiro ee Puntland – Sawirro
Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha oo gogosha maxaabiista siiyay Xabsiga weyn ee Boosaso – Sawirro